International – Page2– Online BBC
Jun152018 by OnlineBBCNo Comments
काठमाडौँ — कतारको अदालतले कतारी नागरिक उमैर मोहोम्मद उमैर अल रमाजानी अल–नुयमीको हत्या अभियोगमा अनिल चौधरीलाई मृत्युदण्डको फैसला सुनाएको छ । तल्लो अदालतका न्यायाधीस मुस्तफा अल वेदाहिवीको अध्यक्षतामा बसेको इजलासले सो फैसला सुनाएको हो । तल्लो अदालतले गरेको फैसला उपर नेपाली दूतावासले चौधरीको जीवनरक्षाको लागि सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदन गरेको छ। औराही–१, मोहत्तरीका चौधरी कतारी नागरिक अल नुएमीको हत्या अभियोगमा सन् २०१७ अप्रिलको पहिलो हप्ता पक्राउ परेका थिए। अदालतले ‘गोली हानेर’ मृत्यदण्ड दिने फैसला सुनाएको हो। हालसम्म हत्या अभियोग लागेका नेपालीहरु मध्ये चौधरीविरुद्व आएको आदेश सबैभन्दा कडा हो। घटनाको पूर्ण विवरण बाहिर सार्वजनिक गरिएको छैन। कतारस्थित नेपाली दूतावासले चौधरीको सहमतिमा पुनरावेदन गरिएको जनाएको छ। सर्वोच्चमा बहस गर्नको लागि लाग्ने वकिल खर्च (झन्डै ३० हजार रियाल, करिव ६ लाख
एजेन्सी – उत्तर कोरियाका नेता कीम जोङ उल २०१८ साल शुरु लगत्तै एकाएक अन्तर्राष्ट्रिय राजनीतिक चर्चाको शिखरमा पुगेका छन् । विश्व राजनीतिका एक शक्तिशाली पात्रको रुपमा संसारले कीम जोङ उललाई मान्न थालेको छ । वर्षौसम्म बाहिरी दुनियाँसँग टाढा रहेका नेता कीम एक बलियो राजनीतिक खेलाडी बनेर संसारको ध्यान आफूतिर खिच्न सफल भएका छन् । चीन, रुस, सिरिया, दक्षिण कोरिया, अमेरिकाका नेताहरुसँग कीमको भेटघाटको मिति तय भइसकेको छ । रुसी राष्ट्रपति भ्लादिभिर पुटिनले आउँदो सेम्टेम्बरमा भेटघाट र छलफलका लागि निम्तो पठाइसकेकाछन् । सिरियाका राष्ट्रपति बसर अल असदले उत्तर कोरिया भ्रमणमा निस्कन मन लागेको बताएका छन् । एसोसियट प्रेसका पूर्व व्युरो चीफ जीन ली ले भनेका छन् कि कीमलाई अन्तर्राष्ट्रिय राजनेताको रुपमा संसारले हेर्न चाहेको छ । उत्तर कोरियाको आत्मविश्वास अहिले सन् २०१० जस्तो छैन । कीमले सत्ताको बागडोर स
कस्तो छ किम जोङ काे विशेष विमान ????
जनवादी गणतन्त्र उत्तर कोरियाली सर्वोच्च नेता किम जोङ उनका लागि विदेश यात्रा एउटा दुर्लभ घटना हो। राष्ट्रको सर्वोच्च नेताको हैसियतमा सिंगापुर पुगेका उनी यसअघि अपनाउँदै आएको मार्गभन्दा फरक तरिकाले सिंगापुर पुगेका छन्। उनले सिंगापुरकाे विदेश भ्रमणमा एयर चाइनाकाे विशेष विमान प्रयोग गरेका छन्। याेसहित उनकाे भ्रमणमा एक होइन तीन–तीन वटा विमान प्रयाेग भएका छन्। यसअघि उनी चीन भ्रमण गर्दा बुलेट फ्रुफ परम्परागत रेलमार्फत् आउजाउ गर्थे। तर चारैतिर समुन्द्रले घेरिएकाे एउटा टापु मुलुक पुग्न रेलबाट सम्भव थिएन। त्यही भएर आइतबार बिहान उनी विमानबाट सिंगापुर अवतरण भएका छन्। सन् २०११ मा देशको सर्वोच्च नेताकाे पदमा अासिन भए लगत्तै उनले हवाई मार्गबाट चीनको भ्रमण गरेका थिए। चीन बाहेक यो उनको पहिलो विदेश भ्रमण हो। त्यस यता हवाई मार्गबाट भएको पहिलो विदेश यात्रा पनि हो। अघिपछि किमले प्रयोग गर्ने विमान कस
Jun102018 by OnlineBBCNo Comments
कोरियामा रहेका नेपालीको तलब बढाउने श्रममन्त्रीको…….
काठमाडौँ। श्रम तथा रोजगारमन्त्री फरमुल्लाह मन्सुरले नेपालका लागि दक्षिण कोरियाका राजदूत पार्क योङ सिकसँग आज भएको भेटमा कोरियामा कार्यरत नेपाली कामदारको श्रम सुरक्षा, मर्यादा तथा सेवा, सुविधामा वृद्धिलगायत विषयमा चासो व्यक्त गरेका छन्। मन्त्रालयमा आज भएको भेटमा नेपाली पक्षले चिकित्सक, इन्जिनियरजस्ता दक्ष जनशक्ति कोरियामा रोजगारीका लागि खुला गर्न, इपिएस प्रणालीमार्फत जाने नेपाली कामदारको दरबन्दी बढाउन, कोरियामा ‘केयर गिभर’ खुलाउन तथा महिला कामदारको माग वृद्धि गर्नेजस्ता विषयलाई प्राथमिकता दिन राजदूतसँग आग्रह गरेको थियो । मन्त्री मन्सुरले भने, “नेपालबाट मेडिकल पास भएर गएकाहरु त्यहाँ फेल भएको, कोरियामा कार्यरत नेपाली कामदारको मृत्यु दर र आत्महत्यामा वृद्धिको विषयमा समेत हामीले राजदूतको ध्यानाकर्षण गराएका छौँ ।” सन् २००७मा नेपाल र कोरिया सरकारबीच रोजगार अनुमति प्रणाली (इपिएस) सम्झौ
अस्ट्रेलिया आउदा पैसा कमाउने र पीआर पाउने सोच त्यागनुहाेस।।।
काठमाडौं — उच्च शिक्षाका लागि अस्ट्रेलिया आउने विद्यार्थीले प्रारम्भिक सल्लाह र सुझाव नै गलत पाउँछन् । विद्यार्थीहरूलाई किन र के उद्देश्यले यहाँ आउने, थाहै हुँदैन । अभिभावकहरूले पनि आवश्यकताभन्दा धेरै अपेक्षा राख्ने गरेको पाइन्छ । नेपालका कन्सल्ट्यान्सीहरूले जुन किसिमको सल्लाह र सुझाव दिन्छन्, त्यो यहाँको समय र परिस्थिति सुहाउँदो नै हँ‘दैन । त्यसले विद्यार्थीलाई आफ्नो उद्देश्य निर्धारित गर्न सहयोग गर्दैन । विद्यार्थीहरूले अस्ट्रेलिया किन आउने सुरुमै निक्र्याैल गर्नुपर्छ । कन्सल्ट्यान्सीलाई थाहा नभएको कुराको गलत परामर्श दिनु हँ‘दैन । अर्काको भविष्य आफ्नो व्यवसायका लागि बिगारिदिन त भएन नि ? नेपाली विद्यार्थीको संख्या तेस्रो स्थानमा छ तर, अन्य देशका विद्यार्थीले अध्ययन सकेपछि जुन किसिमको अवसर र करिअर पाएका छन्, त्यो नेपालीले पाएका छैनन् । त्यसैले पनि नेपाली विद्यार्थीले आउनुअघि आफ्नो उद्दे
गणतन्त्र कोरियासँग व्यापार विस्तारमा जोड..
काठमाडौँ, २५ जेठ । उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री मातृकाप्रसाद यादवले नेपालका लागि गणतन्त्र कोरियाली राजदूत पार्क योङ सिकसँग आज भएको भेटमा ‘समृद्ध नेपाल सुखी नेपाली’भन्ने नेपाल सरकारको नारा सफल बनाउन कोरियाको सहयोग आवश्यक भएको बताउनुभएको छ । सिंहदरबारस्थित कार्यकक्षमा भएको भेटमा मन्त्री यादवले दुवै देशबीच जनस्तरको सम्पर्क र व्यापार विस्तार गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो । सो अवसरमा राजदूत पार्कले विशेष आर्थिक क्षेत्र र औद्योगिक क्षेत्र निर्माणमा नेपाललाई सघाउन आफू सदैव तत्पर रहेको बताउँदै नेपालमा साना, मझौला तथा घरेलु उद्योगमा प्रविधि हस्तान्तरण, खानी अन्वेषण, गुणस्तर परीक्षण प्रयोगशाला निर्माण, ऊर्जा क्षेत्रमा लगानीजस्ता विषयमा चासो व्यक्त गर्नुभयो । आजै मन्त्री यादवले नेपालका लागि इस्टोनियाका विशेष कूटनीतिक प्रतिनिधि रिहो क्रुभसँगको भेटमा नेपालमा जलविद्युत्, पर्यटन तथा औद्योगिक क्षे
यी युवा हुन पसिनाको मूल्यको कदर गर्ने एक सच्चा नेपाली, जसले युएईमा भेट्टाएको डेढ करोड रुपैयाँ फिर्ता गरे
मिरन कार्की/हाल युएई, शुक्रबारको दिन थियो । दुवईमा रहेको इमिरेट्स मलमा रहेको कफीसप स्टारबक्समा काम गर्दै थिएँ । आउने जाने ग्राहक धेरै थिए । त्यो दिन बसेर कफी खाने ठाउँ हेर्नुपर्ने मेरो ड्युटी थियो । १५ हजार दिर्हामको कफी बिक्री भएको थियो । झोलाभरी डलरका मुठा देखिएको थियो । पैसा थोरै भएको भए एड्मिनमै राखेर सम्बन्धित मान्छे आएपछि फिर्ता गरिन्थ्यो । वा सपिङ मलको सेक्युरिटीलाई जिम्मा लगाइन्थ्यो । तर त्यो झोलामा डलरका थुप्रै बन्डल र पासपोर्ट देखेपछि डर लाग्यो । साँझ ५ बजेतिरको कुरा हो । एक हुल ग्राहक आए । उनीहरुले कफी सँगै केही केक अर्डर गरे र त्यही बसेर खाए । भीड थियो । सबै ग्राहकलाई हेर्नुपर्ने भएकोले धेरैबेर एउटै समुहलाई हेर्ने कुरा भएन । कफी खाएपछि एउटा समुह निस्कियो । एउटा कालो झोला भने उनीहरुले टेबुलमा छुटाएका थिए । छाडेको सामान लिन आउलान भनेर आधा घण्टा मैले त्यो टेबुल सफा गरिन ।
Jun72018 by OnlineBBCNo Comments
भारतमा निपाह भाइरसको आतंक, फलफुलको बजार प्रभावित
नयाँ दिल्ली । भारतको केरल राज्यमा फैलिएको निपाह भाइरसको संक्रमणका कारण त्यहाँको जनजीवन मात्र प्रभावित भएको छैन बरु कृषि अर्थतन्त्रमा समेत धेरै ठुलो प्रभाव परेको छ । केरल व्यापार संघले दिएको जानकारी अनुसार यस भाइरसको त्रासले मानिसहरूले तरकारी र फलफूलको सेवन बन्द गरिदिएका छन् जसले गर्दा तरकारी तथा फलफूल व्यवसाय धराशायी हुने अवस्थामा पुगेको छ। केरलमा यस भाइरसका कारण हालसम्म १७ जनाको ज्यान गइसकेको छ । तटीय नगर कोझिकोडमा मात्रै १४ जनाले ज्यान गुमाएको भारतीय मिडियाले जनाएको छ। प्रभावित इलाकाहरूको जनजीवन तंग्रिन थालेको भएपनि फलफुल र तरकारीबाट भाइरस फैलिएको हल्लाका कारण गत १० दिनमा मात्रै १.६ खर्ब रुपैयाँको तरकारी र फलफुल कुहिएको छ । केरलमा प्रतिदिन ३२ अर्बको तरकारी तथा फलफुल खपत हुने गरेको बताइएको छ नयाँ दिल्ली । भारतको केरल राज्यमा फैलिएको निपाह भाइरसको संक्रमणका कारण त्यहाँको जन
बगैंचामा आलू लगाउँदा जब पतिले खोपडी फेला पारे पत्नीले भनिन- नडराऊ मेरो पहिलो पति हो…
साइबेरिया । साइबेरियामा एउटा मुटु हल्लाउने खालको हत्याको रहस्य खुलेको छ । साइबेरियाको लूजीनो क्षेत्रमा एक जना आफ्नो बगौचामा आलु लगाइरहको थिए । माटो खोत्ल्दै गर्दा उनको हातमा अचानक एउटा मानव खोपडी फेला पर्यो । मानव खोपडी देखेर ती मानिसको होश उड्यो । तर त्यो भन्दा रहस्यमय कुरा के भने जब उनकी पत्नी पछाडि बाट आएर भनिन् ‘नडाराऊ यो त मेरो पहिलो पति हो । जुन २० वर्ष अगाडि मेरै हातले मरेको थियो ।’ त्यसपछि दोस्रो लोग्नेले उनलाई जेल पुर्याए ! घटनाको रहस्य थाहा पाएपछि दोस्रो पति आतिए । पत्नीले उनलाई भनिन्, ‘ यो कुरा २० वर्ष पुरानो हो । मेरो पहिलो पति बेस्सर रक्सी खाएर आएको थियो । रिसको झोंकमा मैले उसलाई बञ्चरोले हाने । यसै कारणले उसको मृत्यु भयो । घटना बारे बताउँदै ६० वर्षी महिलाले दोस्रो श्रीमानलाई नआत्तिन र शान्त हुन आग्रह गरिन् । र भनिन् ‘अब सबकुरा भूल।’ तर दोस्रो श्रीमान सिधै प्रह
वैज्ञानिकले यमग्रहबारे गरेको अनुमान असत्य….!!
वैज्ञानिकले यमग्रहका विषयमा गरेको अनुमान असत्य भएको त्यहाँ पठाइएको अन्तरिक्षयानले खिचेर पठाएका तस्वीरबाट प्रमाणित भएको छ। नेपाल एष्ट्रोनोमिकल सोसाइटी र साउथ वेष्टर्न स्टेट कलेजले आज यहाँ आयोजना गरेको नासाका अनुसन्धाता डा हेन्द्री थ्रूपसँगको संवादमा यमग्रहमा वायुमण्डल र पर्वत शृङ्खला पाइएको जानकारी गराइयो। यसअघि यमग्रहमा वायुमण्डल र पर्वत शृङ्खलाजस्ता बनोट नभएको अनुमान गरिएको थियो। हेन्द्रीलाई विद्यालयदेखि विश्वविद्यालय तहसम्मका विद्यार्थीले प्रश्न सोधेका थिए। सन् २०१५ मा यमग्रह पुगेको अन्तरिक्षयान हाल त्यहाँबाट क्षुद्रग्रह र पुच्छ«ेतारातिर अघि बढेको छ। यानमा सन् २०४० सम्मलाई पुग्ने ब्याट्री रहेको जनाइएको छ। यमग्रहमा मिथेन ग्यास र ज्वालामुखी विष्फोट भइरहेको तस्वीर पनि यानले खिंचेर नासामा पठाएको थियो। हेन्द्री नासाको न्यू होराइजन मिशन र यानअमेरिकी अन्तरीक्ष एजेन्सी नासाले मं